Nepali Christian Bible Study Resources - आकाश, पृथ्वी र मानिसको उमेर कति?
» अध्ययन मालाहरू » विज्ञान, बाइबल र मुक्तिदाता » ६-आकाश, पृथ्वी र मानिसको उमेर कति?
आकाश, पृथ्वी र मानिसको उमेर कति?
ब्रह्माण्ड कति वर्ष पुरानो छ? “______मा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो” भनेर उत्पत्ति १:१ ले बताउँछ। यो “शुरु" भनेको कहिले हो? सृष्टिको यस उदेकको कार्य कहिले सम्पन्न भयो? सयौं वर्ष अगाडि? हजारौं वर्ष अगाडि? अरबौं वर्ष अगाडि? खरबौं वर्ष अगाडि? आकाश र पृथ्वीको उमेरको बारेमा बाइबलले के सिकाउँछ?
उमेर पत्ता लगाउने पो कसरी?
तपाईंको विद्यालयको उमेर कति भयो भनी जान्न तपाईं उत्सुक हुनुहुन्छ होला। त्यो विद्यालय कहिले निर्माण भयो? तपाईंको हजुरबुबाले भन्नुहोला, “त्यो विद्यालय कहिले निर्माण भयो भनी मलाई याद छ। म त्यतिबेला १८ वर्षको थिएँ”। त्यो विद्यालय कहिले निर्माण भएको हो भनेर तपाईंको हजुरबुबाले भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त्यस कुराको गवाही हुनुहुन्थ्यो। थ्वीको उमेर पत्ता लगाउनलाई कठिन छ किनभने यस महान घटनाको बेला कुनै पनि मानिस उपस्थित थिएन। कुनै वैज्ञानिकले यसो भन्ला, “पृथ्वी ४-५ अरब वर्ष पुरानो छ”। उसले यही विश्वास गर्दछ, तर के उसले यो कुरा साच्चै जान्दछन् त? के पृथ्वीको सुरुआत हुँदा उनी त्यहाँ थिए? अथवा के उक्त घटनाको गवाही दिन सक्ने कसैलाई उनले जान्दछन्? भु येशू सृष्टिको प्रारम्भमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना १:३; कलस्सी १:१६; एफेसी ३:९)। सृष्टिको विषयमा उहाँको गवाहीलाई हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्छौं। स्वर्गदूतहरू पनि त्यसबेला उपस्थित थिए (अय्यूब ३८:४-७)। तर उक्त घटनाको गवाही हुनका निम्ति कुनै मानिस पनि त्यहाँ थिएन।
प्रश्‍न: एउटा कोठामा पस्दा त्यहाँ एउटा ५ इन्च अग्लो मैनबत्ती २-इन्च प्रति-घण्टाको दरले जल्दै गरेको तपाईंले अवलोकन गर्नुभयो। के यति मात्रै तथ्यको आधारमा उक्त मैनबत्ती जलिरहेको समय कति भयो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ? ____________। तर एक गवाहीको आधारमा उक्त मैनबत्तीलाई बाल्नुभन्दा अगाडि १० इन्च अल्गो थियो भन्ने तथ्य पनि थाहा पाउनुभयो भने अब के त्यो जलिरहेको समय कति भयो भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? __________ ‘हालसम्म ३ इन्च जल्न भ्याएको रहेछ (८ इन्च – ५ इन्च = ३ इन्च); वितेको समय = २ x ३ इन्च = ६ घण्टा।’
उदाहरणबाट हामी बुझ्छौं कि कुनै कुरा कति पुरानो छ भनेर जान्न त्यसको सुरुको अवस्था (initial conditions) बारे जान्न हामीलाई आवश्यक पर्छ। मैनबत्ती सुरुमा कति अग्लो थियो नजानीकन त्यसको ज्वलनको ‘उमेर’ निकाल्न सकिन्न। (नोट: साथै त्यो निरन्तर एउटै दरले जलको थियो भन्ने मानिलिनुपर्ने हुन्छ। यदि मैनबत्ती टुप्पोतिर पातलो र फेदतिर मोटो भएको खण्डमा हाम्रो अघिको हिसाब फेल खान्छ! त्यसैले सुरुको अवस्था अवलोकन गर्न नपाउँदा ‘उमेर’ पत्ता लगाउन गाह्रै छ।)
विश्वब्रह्माण्डको सुरुआतको बारेमा कसरी जान्ने त? “___________द्वारा हामी ___________छौं।” (हिब्रू ११:३)। विश्वास भनेको परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरूलाई विश्वास गर्नु हो। हाम्रो विश्वास सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्तामाथि छ जो सुरुआतमा हुनुहुन्थ्यो र जसले सुरुमा सृष्टि गर्नुहुँदा आकाश र पृथ्वी कस्ता थिए भनी बताउने उत्पत्तीको पुस्तक हामीलाई दिनुभएको छ। सबै कुराहरू सुरु हुँदा हामी त्यहाँ थिएनौं (अय्यूव ३८:४), तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो! हाम्रो पृथ्वी ग्रहको बारेमा सृष्टिकर्ताले हामीलाई दिनुभएको गवाहीलाई हामी विश्वास गरौं!
सृष्टिको बारेमा हाम्रो अध्ययनमा (पाठ ४) पृथ्वी ________ दिनमा सृष्टि गरियो, घाम, चन्द्रमा र ताराहरू _________ दिनमा सृष्टि गरिए र मानिसचाहिँ _________ सृष्टि गरियो भनी हामीले अध्ययन गर्यौं। पृथ्वी, घाम, चन्द्रमा, ताराहरू र मानिस सबै नै एउटै सातामा सृष्टि गरिएका हुन् (प्रस्थान २०:११)। त्यसैले तिनीहरूको उमेर वास्तवमा एउटै छ! विकासवादीहरूले सिकाएझैं घाम र पृथ्वी मानिसभन्दा अरबौं वर्ष पुरानो छैन। वास्तवमा मानिसभन्दा पृथ्वी केवल पाँच दिन मात्र जेठो हो! पृथ्वी कति पुरानो छ भनी हामीले जान्न सक्यौं भने, घाम कति पुरानो छ भनी हामी जान्नेछौं र यस पृथ्वीमा मानिस कति समयदेखि रहँदै आएको छ भनी पनि हामीले जान्नेछौं। आदमको सृष्टि कहिले भएको हो भनी हामीले जान्न सक्यौं भने पृथ्वी, घाम र चन्द्रमा कति उमेर पुरानो छन् भनी हामीले जान्नेछौं! ती सबै एकै समयमा बनाइएका हुन्, अर्थात् सृष्टि साताका छ दिनहरू भित्र। यो सृष्टि साता कति अगाडिको कुरा हो? अरबौं वर्ष? करोडौं वर्ष? कि हजारौं वर्ष? यस पाठमा हामी यही प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौं।
केही पुरानो देखिने नयाँ वस्तु
जब कुनै कुराको सृष्टि गरियो, त्यो पुरानो देखिए तापनि वास्तवमा पुरानो भने थिएन। यो त भर्खर मात्र सृष्टि गरिएको थियो! केही उदाहरणहरू हेरौं:
परमेश्‍वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उनलाई एउटा बच्चाको रूपमा सृष्टि गर्नुभएर बढ्नको निम्ति २५-३० वर्ष पर्खनुभयो कि उहाँले पूरै बढेको मानिसको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो? (उत्पत्ति २:७,१५,२०,२३,२५)? ______________________। यदि तपाईंले सृष्टिको छैटौं दिनमा सृष्टि गरिएको आदमको कुनै तस्वीर देख्न सम्भव भएको भए, उनी सम्भवत: २५ वा ३० वर्षको मानिस जस्तो देखिने थिए! के उनी साँच्चै २५ वा ३० वर्ष उमेरका थिए? ________ उनी वास्तवमा एक दिन भन्दा पनि कम उमेरका थिए! यो हाम्रो निम्ति एउटा अनौठो कुरा होला। एक वर्षको जन्मदिन मनाउँदा, हामीले सानो बालक देख्ने अपेक्षा गर्दछौं। तर आदमको पहिलो वर्षको जन्मदिन आउँदा, उनी एउटा पूरा बढेको वयस्क मानिस थिए! आदम केही पुरानो देखिने एक नयाँ सृष्टि थिए। उनी वास्तवमा जति थिए, त्यो भन्दा वृद्ध देखिन्थे।
२.रूख तथा पर्वतहरू
रूखहरूको सृष्टि गर्नुहुँदा, परमेश्वरले एउटा बीउको सृष्टि गरी त्यसलाई रोप्नुभएर त्यो बढ्दै गएर रूख बन्नलाई पर्खी बस्नुभयो कि सुरुमै पूरा बढेको रूखको सृष्टि गर्नुभयो (उत्पत्ति १:११)? ___________________। उक्त रूखलाई सृष्टि गरिएको पाँच मीनेटपछि त्यसको सुरुको अवस्थाको कुनै जानकारी नभएको एक वैज्ञानिकले अवलोकन गरेका भए त्यसको उमेर १०० वर्ष वा बढी छ भनी तिनले अनुमान लगाउन सक्ने थिए। के साँच्चै उक्त रूखको उमेर त्यति नै हो? __________। त्यो कति पुरानो थियो? __________________________ यो १०० वर्ष पुरानो देखिन्थ्यो किनभने यो पूरा बढेको रूपमा सृष्टि गरिएको थियो र त्यसैले यो रूख केही पुरानो देखीने नयाँ सृष्टि थियो। पर्वतहरूको सम्बन्धमा पनि यही कुरा साँचो हो। यदि कुनै वैज्ञानिकलाई पर्वतहरू सृष्टि गरिएको एकदिन पछि त्यहाँ ल्याउने हो भने, उसले ती चुचुराहरू हेर्नेथियो र ती पर्वतहरू सैयौं वर्षदेखि त्यहीँ थिए भनी निश्कर्ष निकाल्ने थियो। ती पर्वतहरू पनि भरखरै सृष्टि गरिएका भए तापनि केही पुरानै देखिन्थे।
३.कुखुरा र अण्डा
कुनचाहिँ पहिले आयो, कुखुरा कि अण्डा (उत्पत्ति १:२१)? यस प्रश्नले धेरै मानिसहरूलाई दोधारमा पारेको छ तर बाइबलको जवाफ प्रस्टै छ। सबै पशुहरू पूरा बढेको अवस्थामा सृष्टि गरिएका थिए। परमेश्वरले पहिले कुखुरीलाई बनाउनु भयो, र कुखुरीले अण्डाहरू कोरल्यो! बाइबलमा विश्वास नगर्ने मानिसलाई यस प्रश्नको जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ! यदि अण्डा पहिले आयो भने, कसले अण्डा पार्यो? यदि कुखुरी पहिले आयो भने, कसले कोरल्यो? तर यदि सृष्टिकर्ताले यसलाई एउटा पूरा बढेको कुखुराको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो भने, त्यहाँ कुनै समस्या रहँदैन! बाइबलले हामीलाई सुरुआतको बारेमा बताउँछ। परमेश्वरले कुखुराबाट सुरू गर्नुभयो। प्रथम अण्डाहरू पछि आएका हुन्!
८० प्रकाश वर्ष टाढा रहेको ताराको बारेमा विचार गर्नुहोस्। उक्त ताराबाट अहिले निस्केको प्रकाशको किरण पृथ्वीमा आ‍इपुग्न र विशाल दुरविनद्वारा देखिन ८० वर्ष लाग्नेछ। सबैभन्दा निकटमा रहेको तारा, अर्थात सूर्यकै किरण यहाँ आइपुग्न आठ मीनेट लाग्छ।
आज हामी लाखौं प्रकाश वर्ष परका ताराका प्रकाश देख्‍न सकिरहेका छौं। के यसको मतलव पृथ्वी लाखौं वर्ष पुरानो हुनुपर्छ भन्ने हो? कदापि होइन। पहिला, हामीले यो बुझ्नु खाँचो छ, प्रकाश वर्ष भनेको दूरीको नाप हो, समयको होइन। अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने व्यक्तिले कुनै तारा केही प्रकाश वर्ष टाढा छ भनी भन्दछ भने, उसले उक्त तारा कति टाढा छ (दुरी) भनी भनिरहेको हुन्छ, त्यो ताराको उमेर कति भयो, वा त्यो तारा अस्तित्वमा आएको कति समय भयो (समय) भनी भनिरहेको हुँदैन। दोस्रो कुरा, उत्पत्ति १:१७ ले ताराहरू _________ मा प्रकाश दिनलाई सृष्टि भएको कुराको उल्लेख गर्छ। के सृष्टिकर्ताले ताराहरू पहिला सृष्टि गर्नुभएपछि त्यसको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्नको लागि लाखौं वर्ष पर्खेर बस्नुभयो होला? अहँ। उहाँले ताराहरू सृष्टि मात्र गर्नुभएन तर सृष्टि गर्नेवित्तिकै तिनका प्रकाश पृथ्वीमा देखियोस् भनी त्यसका किरणहरू समेत पृथ्वीमा पर्ने गरीकन सृष्टि गरिदिनुभयो। यदि परमेश्वरले ताराहरू सृष्टि मात्र गर्नुभएर उक्त ताराको किरणहरू पृथ्वीमा नपार्नुभएको भए, आदमा रातमा आकाशमा हेर्नेथिए र कुनै पनि तारा देख्नेथिएनन्। सबैभन्दा नजिकको ताराबाट पनि प्रकाशलाई पृथ्वीमा आइपुग्न निकै वर्ष लाग्नेथियो। त्यस अवस्थामा, आदमले केवल एउटै तारा, अर्थात सूर्य मात्र देख्नेथिए। तर सुरुदेखि नै आदम र अरूहरूले ताराहरूले भरिएको आकाश देख्न सक्दथे (उत्पत्ति १५:५ सित तुलना गर्नुहोस्)।
५.माटो, बालुवा, चट्टान
रूखहरू र वनस्पतिहरू हुर्कनको निम्ति माटो चाहिन्छ। हामीले आज माटोको अवलोकन गर्यौं भने, माटोको आफ्नै इतिहास छ भनी हामीले अनुमान गर्नसक्छौं। सायद त्यो माटो एकसमय कडा चट्टान थियो होला र वर्षौं-वर्षको प्राकृतिक शक्तिहरूको कारणले आजको माटोको अवस्थामा आइपुग्न साना-साना कणहरूमा टुक्रा भएको हुनुपर्छ! परमेश्वरले रूखहरू र वनस्पतिहरूको निम्ति माटो नै सृष्टि गर्नुभयो जस्तो तपाईंलाई लाग्छ कि उहाँले पहिले चट्टान सृष्टि गर्नुभयो र चट्टान साना-साना कणहरूमा टुक्रिएर माटो बन्नलाई हजारौं वर्षहरू पर्खनुभयो जस्तो लाग्छ? के परमेश्वरले बालुवा सृष्टि गर्नुभयो, कि उहाँले पानीको शक्तिद्वारा बालुवा उत्पादन गर्न हजारौं वर्ष पर्खनुभयो? (धेरैजसो बालुवामा चट्टानका कणहरू पाइन्छन्।)
मानौं तपाईंको हातमा चट्टान सृष्टि गर्ने सामर्थ्य छ! निश्चय पनि, केवल सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ताले मात्र यसो गर्न सक्नुहुन्छ भनी हामीलाई थाह छ, तर एकछिनलाई मानिलिऔं कि तपाईंको हातमा शून्यताबाट एउटा चट्टान सृष्टि गर्ने सामर्थ्य छ। मानौं त्यो नव सृजित चट्टानलाई तपाईंले कुनै भूगर्भविदकहाँ लैजानुभयो। उसले त्यो चट्टानको अध्ययन गर्नेथियो र सायद उक्त चट्टान अरबौं वर्ष पुरानो हो भनी तपाईंलाई बताउनेथियो! त्यसो अड्कल गर्दा के ऊ सही हुनेथियो? __________ वास्तवमा, त्यो चट्टान त भर्खर मात्र सृष्टि गरिएको थियो!
केही पुरानो देखिने नयाँ पृथ्वी
यदि तपाईंले पृथ्वीलाई सृष्टि भए लगत्तै हेर्ने हो भने, त्यो केही पुरानो देखिने नयाँ वस्तु भएकोले यहाँको रूखहरू, पहाडहरू, समुद्रहरू, चट्टानहरू र सूर्यहरू केही लामो समयदेखि नै त्यहीँ थिए जस्तो देखिन्थ्यो। तर वास्तवमा, ती थोकहरू हालसालै सृष्टि गरिएका थिए। के यस्तो पुरानो देखिने कुराहरू सृष्टि गर्नुभएर परेमश्वरले हामीलाई झुक्काउन खोज्नुभएको हो? कदापी होइन! परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सृष्टि प्रणालीको बारेमा बताउनुभएको छ, र हरेकले (वैज्ञानिकहरूले पनि) उत्पत्तिको पुस्तक पढेर सृष्टिको बारेमा सत्य कुरा जान्न सक्छ! परमेश्वरले मानिसहरूलाई धोका दिइरहनुभएको छैन तर बाइबललाई गम्भिर रूपमा नलिएर मानिसहरूले आफैंलाई धोका दिइरहेका छन्। बाइबलका परमेश्वरलाई र उहाँले भन्नुभएको कुराहरूलाई विश्वास गर्न उनीहरू इन्कार गर्दछन्। जसरी एउटा जादुगरले आफ्ना श्रोताहरूलाई आफ्ना चमत्कारहरू गर्ने तरिकाको बारेमा बताए भने कसैलाई झुक्काइरहेको हुँदैन उसरी नै परमेश्वरले पनि आफूले संसारलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो भनी पूरा व्याख्या गर्नुभएर कसैलाई धोका दिनुभएको छैन।
करिब २००० वर्ष अगाडि सृष्टिकर्ता यस संसारमा वास्तवमै हिँडडुल गर्नुभयो र उहाँको सृष्टि प्रणालीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्नुभएका ती आश्चर्यकर्महरूलाई मानिसहरूले देख्न सक्दथे। तीमध्ये केही आश्चर्यकर्महरूको बारेमा बिचार गरौं:
१) पानी दाखरसमा परिणत भएको
यूहन्ना २ मा हामीले विवाह भोजमा प्रभुले सम्पन्न गर्नुभएको पहिलो आश्चर्यकर्मको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छौं। प्रभुले उनीहरूलाई ६ ओटा पानीका घ्याम्पाहरूमा पानी भर्ने आदेश दिनुभयो (६-७ पद)। हरेक घ्याम्पामा २०-३० पाथी पानी अटाउँथ्यो! त्यसैले आफ्नो सृष्टि गर्नसक्ने सामर्थ्यद्वारा परमेश्वरका पुत्रले १५० पाथी पानीलाई किण्वीकरण नगरीएको दाखरसमा पविर्तन गर्नुभयो।
यस घटनापछि तुरुन्तै भोजका मुखियाले दाखमद्य चाखे। के हालसालै गरिएको आश्चर्यकर्मको बारेमा तिनलाई थाह थियो (९ पद)? ____________ तिनले उक्त दाखमद्य कहीँ राखिएको थियो र त्यो दाखमद्य कुनै समय दाखबारीमा भएका दाखहरूबाट बनाइएको थियो भनी सोचेको हुनुपर्छ। ती दाखहरू दाखको बोटमा हुर्किए र एकदिन ती पाके, मानिसहरूले चुँडेर निकाले र तिनलाई पेलेर दाखरस बनाए भनी तिनले सोचे होलान्। तर भोजका मुखिया गलत थिए! यो दाखमद्य दाखहरूबाट आएको थिएन र त्यहाँ कुनै दाखको बोट थिएन! ती दाखरस त सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ताका वचनहरूद्वारा बनिएका थिए! के यो आश्चर्यकर्म गर्न येशूलाई पानी नै चाहिन्थ्यो होला? ___________ उहाँको सृष्टि गर्न सक्ने सामर्थ्यद्वारा, प्रभु येशूले पानीलाई कुनै पनि मानिसका जिब्राहरूले चाखेको भन्दा सर्वोत्तम स्वादको दाखरसमा परिवर्तन गर्नुभयो।
२)शान्त पारिएको समुद्र
लूका ८:२२-२५ पढ्नुहोस्। यहाँ सृष्टिकर्ताको अर्को आश्चर्यकर्मको वयान छ। गालीलको समुद्र तुरुन्तै थामियो र आँधिबेहरी शान्त भयो (२४ पद)। मानौं समुद्र शान्त भए लगत्तै कुनै मानिस हेलिकप्टरमा उक्त स्थानमाथि उडेर आयो (हुन त त्यसबेला हेलिकप्टरहरू थिएनन्)। उसले तल हेर्नेथियो र यो शान्त भएको समुद्रलाई हेर्नेथियो। के उसले त्यहाँ एकछिन अघि मात्र आँधी चलिरहेको थियो भनेर अनुमान लगाउन सक्ने थियो? ____________ बतास र पानीले पनि तिनीहरूको सृष्टिकर्ताका आज्ञाहरू पालन गर्दछन्!
३)पाँच हजारलाई खुवाउनुभएको रोटी र माछाहरू
मत्ती १४:१५-२१ पढ्नुहोस्। मानौं तपाईं त्यस भोजको बीचमा पुग्नुभयो र हालसालै एउटा अचम्मको आश्चर्यकर्म सम्पन्न भएको बारेमा तपाईं अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा व्यक्तिले तपाईंलाई माछा देखाउँदै प्रश्न गर्छ, “के यो माछाको जीवन कथा बताउन सक्नुहुन्छ?” तपाईंलाई यो प्रश्न सुरुमा अनौठो लाग्ला, तर तपाईंले ठीक जवाफ दिने सर्वोत्तम प्रयास यसरी गर्नुहुनेछ, “मेरो विचारमा, यो माछा पहिले अण्डाबाट विकसित भएको हुनुपर्छ र गालीलको समुद्र वरिपरि पौडिरहेको हुनुपर्छ। एकदिन एकजना मछुवाले यसलाई आफ्नो जालमा पक्रेको हुनुपर्छ र त्यसपश्चात् यो खानको निम्ति तयार परिएको हुनुपर्छ”। तर उक्त व्यक्तिले यस्तो जवाफ दिनेछ, “होइन, तपाईं गलत हुनुहुन्छ। यो माछा कहिले पनि अण्डाबाट विकसीत भएको होइन, यो त पानीमा पनि कहिल्यै पौडिएन, यसलाई पक्रिएको पनि होइन—यो माछा त कहिले भिजेको पनि थिएन। सृष्टिकर्ता येशूले यो माछालाई भर्खर मात्र बनाउनुभएको हो! त्यती मात्र होइन, हामीले खाइरहेका यी जौका रोटीहरू पनि ती जौबाट बनिएका हुन् जुन कहिल्यै पनि खेतमा फलेन, जसको कटनी पनि गरिएन र पीठो पनि बनाइन नता आगोमा पोलिए। यी रोटीहरूको भिन्नै इतिहास छ!” (केवल दुई ओटा माछा र पाँचओटा रोटीहरूको मात्र वास्तविक इतिहास थियो; बाँकी माछा र रोटीहरू त्यस समयका निम्ति मात्र सृष्टि गरिएका थिए)।
येशूले निको पार्नुभएका हरेक रोगी, लङ्गडो र कुष्ट रोग लागेको व्यक्ति पहिले कहिल्यै नभएको स्वस्थ अवस्थामा पुगेको देखिन्थ्यो। अचम्मको चङ्गाइको कारणले ती मानिसहरू पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्थे र यदि ती मानिसहरू चङ्गाइ गरिएका हुन् भनी तपाईंलाई थाह नभएको भए, उनीहरू निकै समयदेखि नै यस्तो स्वस्थ अवस्थामा रहेका रहेछन् भनी तपाईंले अनुमान लगानुहुनेथियो। यूहन्ना ९ अध्यायको जन्मदेखिकै अन्धो मानिसको बारेमा विचार गर्नुहोस्। येशूले उसलाई एकैछिनमा पूर्ण रूपमा निको पार्नुभयो। अब मानौं कि उक्त मानिस आँखा जचाउन चिकित्सककहाँ गयो।
अन्धोमानिस: “मेरा आँखाहरू कस्ता छन्, डाक्टर?
चिकित्सक: “भाइ, तपाईंको आँखा एकदम ठीक छ। साँच्चै तपाईंको दृश्यशक्ति साह्रै राम्रो रहेछ!”
अन्धोमानिस: “होइन, डाक्टर, तपाईंले बुझ्नुभएन। हिजोसम्मको मेरो सम्पूर्ण जीवनमा म अन्धो थिएँ, तर सृष्टिकर्ताले मलाई निको पार्नुभयो!”
(साधारणतया: चिकित्सकले उक्त मानिसको आँखा सुरुदेखि नै राम्रो थियो भनी मानिलिनेछन्, तर त्यो विचार गलत हुनेथियो।)
प्रेरित ३ मा उल्लेखित _________ _________देखि __________ भएको मानिसको सवालमा पनि यही नै सत्य हुन्छ (प्रेरित ३:२)। परमेश्वरले उसलाई निको पार्नुभयो (६-७ पदहरू) र उक्त मानिस हिँड्दै र उफ्रँदै गरेको देख्ने सबै मानिसहरू छक्क परे (८-११ पदहरू) किनभने उनीहरूले उसको लङ्गडो अवस्थाको इतिहास जान्दथे, तर उक्त मानिसले आफ्नो त्यस्तो कुनै विगत नभएको जस्तै गरिरहेको थियो। यदि तपाईंले उक्त मानिसलाई ऊ निको भएपछि भेट्नुभएको भए, ऊ जन्मदेखि नै लङ्गडो थियो भनी तपाईंले कहिल्यै अनुमान लगाउन सक्नुहुँदैन थियो।
लाजरसलाई मरेकाबाट पुनर्जीवित पारिएको आश्चर्यकर्मको बारेमा यूहन्ना ११ मा पढ्नुहोस्। मानौं लाजरस डाक्टरकहाँ आफ्नो शारीरिक परीक्षण गर्न गए:
चिकित्सक: “अँ, लाजरस, तिम्रो परिक्षण सफल भयो, तिमी त साह्रै स्वस्थ अवस्थामा देखिन्छौ! तिम्रो शारीरिक अवस्था अति राम्रो छ”
लाजरस: “डाक्टर ज्यू, तपाईंको अनुभव अनुसार, मेरो विगतको इतिहास कस्तो थियो होला?”
चिकित्सक: मलाई लाग्छ, तिमीले राम्रो कसरत र खानपिन गरिरहेका छौ र केही समयदेखि राम्रो अवस्थाको आनन्द लिरहेका छौ”
लाजरस: “डाक्टर ज्यू, तपाईंलाई सायद अचम्म लाग्दा, तर म हालसालै मरेको थिएँ र मेरो शरीर ४ दिनसम्म चिहानभित्र कुहिन र गन्हानउ थालिसकेको थियो (यूहन्ना ११:३९), तर मेरो सृष्टिकर्ता र मेरो मुक्तिदाताले मलाई पुन: जीवित पार्नुभयो!”
पृथ्वी कति पुरानो छ?
सृष्टिका परमेश्वरमा र उत्पत्तिको पुस्तकमा विश्वास नगर्ने मानिसहरूले पृथ्वी धेरै नै पुरानो छ भनी विश्वास गर्छन्। सन् १९०० ताका विकासवादीहरूले पृथ्वी ५ करोड वर्ष पुरानो छ भनी विश्वास गर्दथे। आज, १०० वर्ष भन्दा धेरै समयपछि, पृथ्वी त्यो भन्दा पनि अझै पुरानो छ भनी उनीहरू विश्वास गर्दछन्। “पृथ्वीको इतिहास ४ अर्व भन्दा बढि समयावधिको छ” (१९९८ इन्साइक्लोपिडियाबाट)। मौकाको ईश्वरलाई सृष्टिकार्य गर्नको निम्ति थुप्रै समयको खाँचो पर्दछ (पाठ ४ हेर्नुहोस्)! आज अधिकांश विकासवादीहरूले पृथ्वी करिब ४.६ अर्व वर्ष पुरानो छ भनी भन्दछन्। यसको अर्थ आज उनीहरूले पृथ्वीको आयु उनीहरूले झण्डै १०० वर्ष अगाडि सन् १९०० मा सोचेको भन्दा १०० गुणा धेरै छ। अबको पचास वा सय वर्षपछि पृथ्वी कति पुरानो छ भनी उनीहरूले भन्लान्? उनीहरूको शिक्षा बदलिरहन्छ र उनीहरूको पुस्तकहरू पनि नयाँ शिक्षाहरू अनुसार परिवर्तन गरिरहनुपर्छ।
यस पाठमा पृथ्वी करोडौं वर्ष पुरानो छैन र निश्चय पनि अरबौं वर्ष पुरानो त छँदैछैन, तर वास्तवमा यो त केही हजार वर्ष मात्र पुरानो छ भनी हामी अध्ययन गर्नेछौं। मानिसहरूले सोचेझैं पृथ्वी वास्तवमै पुरानो छैन।
केही रूखहरू निकै पुराना छन्। सेकुओइया रूख (Sequoia trees) ३,५०० वर्ष पुराना हुन्छन्। ती रूखहरू मोशाको समयमा हुर्कन सुरु गरे र आजसम्म पनि रहिरहेका छन्! केही ब्रिसलकोन पाइन रूखहरू (Bristlecone Pine trees) ४००० वर्ष पुराना छण् जसको अर्थ ती रूखहरू अब्राहामका पालामा बढ्न सुरु गरेका थिए!
बाइबलले हामीलाई पृथ्वीको उमेर र मानिसको उमेरको बारेमा धेरै कुरा बताउँदछ। याद राख्नुहोस्, पृथ्वीको उमेर र मानिसको उमेर वास्तवमा एउटै हो (उत्पत्ति १ अनुसार पृथ्वी मानिसभन्दा जम्मा पाँच दिनले मात्र पुरानो छ)। आदमभन्दा करोडौं-अरबौं वर्ष पहिले पृथ्वी यहाँ थिएन।
विभिन्न खण्डहरूमा हामीलाई बाइबलले विस्तृत वंशावलीहरू दिएको छ जसको आधारमा मानव जातिको मोटामोटी ‘उमेर’ पत्ता लगाउन सकिन्छ (अर्थात्, यस संसारमा आदमबाट सुरु गरेर मानिस बाँच्दै आएको समय)।
हामीलाई थाह छ, ख्रीष्टको समयदेखि आजको समयसम्म झण्डै २००० वर्ष हुन्छ (ख्रीष्ट करिब ई.सं. ३० मा बौरिउठ्नुभएको थियो)। हामीलाई यो पनि थाह छ, अब्राहामको समयदेखी ख्रीष्टको समयसम्म करिब २००० वर्ष थियो (अब्राहाम यस पृथ्वीमा करिब ई. पू. २००० वर्ष अगाडि बाँचेका थिए)। त्यहाँ अनुमान लगाउन कठिन अन्य दुई समयावधिहरू छन् जसका कारणहरू चाहिँ हामी पछि अध्ययन गर्नेछौं:
१. आदमको समयदेखि जलप्रलयसम्म
२. जलप्रलयदेखि अब्राहामसम्म
तर यी दुवै समयावधिको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई वंशावली दिनुभएको छ। उत्पत्ति ५ मा आदमदेखि नूहसम्मको वंशावली छ (सृष्टिदेखि जलप्रलयसम्म)। उत्पत्ति ११ मा नूहको छोरा शेमको समयदेखि अब्राहामसम्मको वंशावली छ (जलप्रलयदेखि अब्राहामसम्म)।
त्यसैले पृथ्वीको र मानवजातिको उमेर पत्ता लगाउन, हामीले जोड्नैपर्ने ४ ओटा समयावधिहरू छन्:
वंशावलीमा हुन सक्ने केही अन्तरालहरूका सम्भावनाको कारण पहिलो दुई चरणको समयावधिलाई निश्चित रूपमा निर्धारण गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ। एक वा बढि वंशावलीहरूलाई छोड्दा अन्तरालहरू आउँछ।
उदाहरणको निम्ति, मत्ती १:१ मा ख्रीष्टलाई “अब्राहामका ________” भनिएको छ तर ख्रीष्ट र अब्राहामको बीचमा थुप्रै वंशावलीहरूको अन्तराल छ (मत्ती १:२-१६)।
योराम र ओजियाको बीचमा अन्तरालको एउटा उदाहरण छ। मत्ती १:८ मा यस्तो लेखिएको पढ्दछौं, “यो______ ओजियालाई जन्माए (जसलाई उज्जियाह वा अजरियाह पनि भनिन्छ)। के यसको अर्थ योराम उज्जियाहका पिता थिए भन्ने हुन्छ? हामीले पुरानो नियमलाई ध्यानपूर्वक पढ्दा योराम वास्तावमा उज्जियाहका जिजुबुबा थिए भन्ने देखिन्छ।
यहोरामका छोरा को थिए (२ राजा ८:२४)? ________________
अहज्याहका छोरा को थिए (२ राजा ११:२)? ________________
योआशका छोरा को थिए (२ राजा १२:१९-२१)? ________________
अमस्याहका छोरा को थिए (२ राजा १४:२१)? ________________
(नोट: अजर्याहको अर्को नाम उज्जियाह हो। २ राजा १४:२१ मा आफ्नो बाइबलको फुटनोट हेर्नुहोस्।)
समरूप तर अपूर्ण
हामीले बाइबलका वंशावलीहरू अध्ययन गर्दा, बाइबलका लेखकहरूले पूर्णता (कुनै अन्तराल नराखी हरेक बाबु र छोराका नामहरू उल्लेख गर्नु) भन्दा समरूपता (नामहरूलाई नियमित र सन्तुलित रूपमा लेख्नु) प्रति बढी चासो राखेका देखिन्छ। उत्पत्ति ५ र ११ लाई तुलना गर्दा, उनीहरू पूर्ण रूपमा सन्तुलनमा र समरूपतामा रहेको देखिन्छ। दुवै समूहमा १० जना बाबुहरू छन् र दसौं बाबुका ३ महत्त्वपूर्ण छोराहरू छन्:
निम्न चार्टमा छुटेका नामहरू लेख्नुहोस्:
मानिसहरूले यी सूचीका नामहरूलाई कण्ठ गर्न सकुन भनेर यसरी समरूप तरिकाले वंशावलीहरू दिइएको हुनुपर्छ। यी वंशावलीहरूमा मसीहको वंशक्रम छ। मसीह ख्रीष्ट यी नै मानिसहरूका वंश हुनुहुन्छ (लूका ३:२३-२६)। मत्ती ११ मा समरूपतामा लेखिएको वंशावली छ जसमा १४-१४ ओटा पुस्ताहरू गरी ३ समूहहरू छन् (१७ पद हेर्नुहोस्):
मत्ती १:८ मा ३ पुस्ताहरूको बीचमा अन्तराल छ (तीन राजाहरूका नाम लेखिएको छैन) भनी हामीले पहिल्यै हेरिसक्यौं। परमेश्वरको अगुवाइमा लेख्ने मत्तीले यस खण्डमा १४ ओटा मात्रै नामहरू लेख्न चाहे, त्यसैले ८ पदमा तिनले यो अन्तराल राखे। १४-१४ ओटा नामहरू भएको ३ समूहरू सम्झना गर्न पनि सजिलो छ। मत्ती १ को वंशावली समरूप भए तापनि पूर्ण छैनन् भनी हामी जान्दछौं। यसमा केही नामहरू र केही पुस्ताहरू समावेश गरिएका छैनन्।
मत्ती १ को अब्राहामदेखि ख्रीष्टसम्मको वंशावलीमा अन्तरालहरू छन् भनी हामी जान्दछौं। के लूका ३ को आदमदेखी ख्रीष्टको वंशावलीमा पनि अन्तरालहरू हुनु सम्भव छ? उत्पत्ति ५ को आदमदेखि जलप्रलयसम्मको वंशावलीमा अन्तरालहरू हुनु सम्भव छ? यदि त्यहाँ कुनै पनि अन्तरालहरू नभएको भए, हामीले आदमदेखि जलप्रलय र जलप्रलयदेखि अब्राहाम सम्मको समयको सठीक हिसाब निकाल्न सक्नेथियौं। आयरल्याण्डका एक बाइबल विद्वान अशर (Ussher) ले सत्रौं शताब्दीमा बाइबलका चाबी घटनाहरूको हिसाब निकाल्ने प्रणालीको विकास गरे। तिनले ४००४ ई.पू. मा पृथ्वीको सृष्टि गरिएको हिसाब निकाले। यसो गर्दा तिनले उत्पत्ति ५ र ११ मा भएका वंशावलीहरूमा कुनै अन्तराल छैन भन्ने अड्कल गर्दै हिसाब गरेका थिए। यदि उत्पत्ति ५:१-११ मा केही अन्तरालहरू छन् भने, सृष्टिको मिति अझै केही वर्ष पछाडि पुग्न जान्छ।
तसर्थ, वंशावलीमा कुनै अन्तरालहरू भए पनि वा नभए पनि पृथ्वीको सृष्टि केवल ६ वा ७ हजार वर्ष अगाडि मात्र भएको हो। विकासवादीहरूको समय तालिकाभन्दा कति यो भिन्न छ! पृथ्वी ४-५ अरब वर्ष भन्दा पुरानो छ र मानिस १० लाख वर्ष भन्दा पुरानो छ भनी तिनीहरू सिकाउँछन्। बाइबलको अनुसार पृथ्वी अरबौं वा खरबौं वर्ष पुरानो छैन। निश्चय नै, पृथ्वी १०,००० वर्षभन्दा पुरानो छैन।
मानिसको सृष्टि »